Golaha shacabka oo Ansixiyay Natiijada Baaritaanka Guddigii Qalbi-dhagax. – Hornafrik Media Network
Kaddib Kulan ay maanta Golaha shacabka Soomaaliya ku yeesheen Xaruntooda Muqdisho ayey Guddiga loo xil saaray dhiibistii Qalbi-dhagax ku soo gudbiyeen Warbixin ku saabsan Qadiyadda Qalbidhagax.
Intaas kaddib Xildhibaannada Golaha shacabka ayaa ka dooday Warbixinta, waxaana Xildhibaannada intooda badan ku qanceen Warbixinta ay soo jeediyeen Guddiga.
Xildhibaanaddu waxay sidoo kale isku raaceen inay ahayd Qalad wayn oo la galay Dhiibista C/kariin Qalbidhagax oo ah Muwaadin Soomaali ah oo Itoobiya loo gacan galiyay, Waxayna ka dalbadeen in Xukuumaddu ay jawaab ka bixiso arrintan. iyagoo sidoo kalana isku raacay in Ururka ONLF uusan ahayn Urur Argagixiso ah.
Dood dheer kaddib 152 ka mid ah Golaha shacabka ayaa oggolaaday natiijada baaritaankii Galbdiga, waxaa diiday 6, waxaana ka aamusay 3 Xildhibaan oo kale.
Guddiga ayaa sheegay in Madaxda Hay’adda Sirdoonka Qaranka ay maareeyeen arrinta Qalbi-dhagax, islamarkaana Madaxda ugu sarreysa Dalka aan la siinin macluumaad sax ah. Waxayna Masuuliyadda Eedda 1aad saareen Sanbaloolshe oo hadda aan hayn Xilka Taliyaha NISA.
Guddigan ayaa muddo ka badan labo bilood waday baaritaankooda,waxaana intii uu baaritaankaas socday la eryay Taliyihii Nabad Sugidda Soomaaliya, C/llahi Maxamed Cali Sanbaloolshe iyo Taliyihii Booliska Soomaaliya, Gen C/xakiin Daahir Saacid, kuwaas oo xil ka qaadistooda lagu beegay Qarixiin 14-kii October ka dhacay Isgoyska Soobe ee Muqdisho.